Wasiirka amniga XFS oo ka hadlay amniga Galmudug. | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Wasiirka amniga XFS oo ka hadlay amniga Galmudug.
Wasiirka amniga XFS oo ka hadlay amniga Galmudug.
Wasiirka amniga XFS mudane Maxamed Abuukar Islaw oo maanta hadal ka jeediyay shirka dib -u-heshiisiinta Galmudug ee Dhuusamareeb ka socda ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu horeyso amniga iyo is dhex galka ciidankii la isku dhafay ee ka howlgalay Dhuusamareeb iyo magaalooyin kale.
Wasiir Islow aya sheegay in madaxda dowladda dhexe ay dadaal xoogan ku bixinayaan sidii loo xoojin lahaa amniga Galmudug iyo isku dhafka ciidanka isla markaa waxaa uu xusay in guul weyn laga gaaray isku dhafkii ciidanka amniga sidoo kale tababar loo qabtay ciidankii Ahlu sunna kuwaas oo tababar ku qaadanaya Muqdisho iyo Jabuuti.
“Ciidamada dareeskii ciidanka waa la siiyay mushaarkii bishii labaad waa la siiyay waxaan hadda ku howlanahay dib u xoreynta goobaha argagixisadu ka joogto goboladaan xerada Harqaboobe ee Guriceel ayay ciidan milatari ah ku qaadanayaan tababar iyagoo loo diyaarinayo xoreynta dhulkaas qorshuhuna wuxuu yahay in doorashada ka hor la xoreeyo dhulka cadawgu haysto.
“Sidaad la socotaan ciidamo ayaa lagu diyaariyay Hiiraan ciidamadaas waxaan rabnaa haduu ilaahay yiraahdo in la soo qaado Guriceel la keeno ciidanka tababar ay isla qaataan ka dibna Galmudug lagu xoreeyo sidoo kale Hirshabelle lagu xoreeyo iyo degaanada kale ee cadawga Khawaarijta ah ay haystaan” ayuu yiri wasiir Islow.
Previous articleSoomaaliya oo ka qayb gashay wejiga afaraad ee shirka deyn cafinta.
Next articleWasiirka cadaaladda XFS oo shir guddoomiyay kulan bahda cadaaladdu maanta yeesheen.